Genesisi 37 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Hope dzaJosefa (1-11)
Josefa nevakoma vake vane godo (12-24)
Josefa anotengeswa kuti ave muranda (25-36)
37 Jakobho akaramba achigara munyika yeKenani, yakambogarwa nababa vake vari mutorwa.+ 2 Iyi ndiyo nhoroondo yaJakobho. Josefa+ paakanga ari mukomana ane makore 17, aifudza makwai+ nevanakomana vaBhiriha+ nevanakomana vaZiripa,+ madzimai ababa vake. Uye Josefa aivamhan’arira kuna baba vavo. 3 Israeri aida Josefa kupfuura vamwe vanakomana vake vese+ nekuti akanga ari mwanakomana wepaukweguru hwake, uye akaita kuti agadzirirwe nguo refu yakanaka. 4 Vakoma vake pavakaona kuti baba vavo vaimuda kupfuura vamwe vese, vakatanga kumuvenga, uye vakanga vasingakwanisi kutaura naye zvakanaka.* 5 Josefa akazorota hope akadziudza vakoma vake,+ vakabva vatonyanya kumuvenga. 6 Akati kwavari: “Regai ndikuudzei hope dzandarota. 7 Ndarota tichisunga zvisote pakati pemunda, chisote changu chikabva chasimuka, chikamira kuti twi, zvisote zvenyu zvikabva zvakomberedza chisote changu zvikachikotamira.”+ 8 Vakoma vake vakati kwaari: “Hoo uri kuda kuzozviita mambo wedu wotitonga nhai?”+ Saka vakabva vatowedzera kumuvenga, nemhaka yehope dzake uye zvaakataura. 9 Akazorota dzimwe hope, akadzirondedzera kuvakoma vake achiti: “Ndarota dzimwe hope. Rwendo runo ndarota zuva nemwedzi nenyeredzi 11 zvichindikotamira.”+ 10 Akabva adzirondedzera kuna baba vake vakoma vake varipowo, asi baba vake vakamutsiura vakati kwaari: “Hope dzako idzi dzinorevei? Uri kureva here kuti ini naamai vako nevakoma vako tichauya kuzokukotamira?” 11 Vakoma vake vakamuitira godo,+ asi baba vake vakachengeta zvaakataura mumwoyo mavo. 12 Vakoma vake vakaenda kunofudza zvipfuwo zvababa vavo pedyo neShekemu.+ 13 Israeri akazoti kuna Josefa: “Handiti vakoma vako vari kufudza zvipfuwo pedyo neShekemu? Uya ndikutume kwavari.” Iye akati: “Zvakanakai!” 14 Saka akati kwaari: “Enda unoona kuti vakoma vako vakadii. Unoona kuti zvipfuwo zvakadii, wodzoka kuzondiudza.” Akabva amutuma achibva mubani reHebroni,+ akaenda akananga kuShekemu. 15 Akazoonekwa nemumwe murume achidzungaira musango. Murume wacho akamubvunza kuti: “Uri kutsvagei?” 16 Iye akati: “Ndiri kutsvaga vakoma vangu. Munozivawo here kuti vari kufudzira zvipfuwo zvavo kupi?” 17 Murume wacho akati: “Vabva pano. Ndanzwa vachiti, ‘Ngatiendei kuDhotani.’” Saka Josefa akatevera vakoma vake, akavawanira kuDhotani. 18 Vakabva vamuona achiri kure, asati asvika pavaiva, vakatanga kurangana kuti vamuuraye. 19 Saka vakataurirana vachiti: “Onai! Muroti uya ari kuuya.+ 20 Uyai timuuraye tomukanda mune rimwe remakomba emvura, tozoti akadyiwa nechikara, tione kuti hope dzake dzichaguma nei.” 21 Rubheni+ paakazvinzwa, akaedza kumununura. Saka akati: “Ngatiregei kumuuraya.”*+ 22 Rubheni akati kwavari: “Musadeura ropa.+ Mukandei mugomba iri remvura, musango muno, asi musamukuvadza.”+ Chinangwa chake chaiva chekumununura kuti amudzorere kuna baba vake. 23 Saka Josefa paakangosvika kuvakoma vake, vakamubvisa nguo yake, nguo yake yakanaka yaaipfeka,+ 24 vakamutora, vakamukanda mugomba remvura. Panguva iyoyo mugomba macho makanga musina mvura. 25 Vakabva vagara pasi kuti vadye. Pavakasimudza misoro, vakaona boka revaIshmaeri+ raibva kuGiriyedhi. Ngamera dzavo dzakanga dzakatakura namo yemiti inonhuhwirira,* bharisamu, nemakwati anobudisa namo,+ uye vaienda kuIjipiti. 26 Judha akati kuvana vababa vake: “Tinowaneiko kana tikauraya munin’ina wedu, tofukidza ropa rake?+ 27 Uyai timutengesere+ vaIshmaeri, tirege kuisa maoko edu paari. Handiti munin’ina wedu nenyama yedu?” Saka vakateerera mwana wababa vavo. 28 Vatengesi vechiMidhiyani+ pavaipfuura, vakoma vaJosefa vakamubudisa mugomba riya, vakamutengesa kuvaIshmaeri nemasirivha 20.+ Varume ava vakaenda naJosefa kuIjipiti. 29 Rubheni paakazodzokera kugomba ndokuwana Josefa asimo mugomba racho, akabvarura nguo dzake. 30 Paakadzoka kuvanin’ina vake akati: “Mwana haasisimo! Zvino ndichaita sei nhai?” 31 Saka vakatora nguo yaJosefa, vakauraya mbudzi, vakanyika nguo yacho muropa racho. 32 Vakazotumira nguo yacho kuna baba vavo vakati: “Tanhonga nguo iyi. Tinokumbirawo kuti muiongorore, muone kana isiri yemwanakomana wenyu.”+ 33 Vakabva vaiongorora vakati: “Inguo yemwanakomana wangu! Anofanira kunge adyiwa nechikara! Chokwadi Josefa abvamburwa-bvamburwa!” 34 Jakobho akabva abvarura nguo dzake, akasungirira masaga muchiuno, akachema mwanakomana wake mazuva mazhinji. 35 Vanakomana vake vese nevanasikana vake vese vakaedza kumunyaradza, asi akaramba kunyaradzwa, achiti: “Ndichapinda muGuva*+ ndichingochema mwanakomana wangu!” Baba vake vakaramba vachimuchema. 36 VaMidhiyani vakamutengesa muIjipiti kuna Potifari, mukuru mumuzinda waFarao+ uye mukuru wevarindi.+
^ Kana kuti “kutaura naye zvine rugare.”
^ Kana kuti “kuuraya mweya wake.”
^ ChiHeb., “rabhudhanamu.”